Company Profile - Shanghai Vukile Co., Ltd
Uvukile ConstructionMachinery (Shanghai) Co., Ltd ibandakanyeka ekuphuhliseni, lemveliso andexporting oomatshini zokwakha kwimimandla ekwakheni, imigodi, amandla zobunjineli andlogistic. Uhambisa zigaba ezinkulu 8, 38 umgca imveliso kunye neemodeli 1000 morethan, Uvukile iyakwazi ukunikezela ngokupheleleyo iphakheji ngezixhobo theclients kuzo zonke iinkalo zobomi. Le nkampani lusoloko lizimisele ukunika abathengi ourrespectable iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokusebenza oluthembekileyo, ixabiso kukhuphiswano kunye neenkonzo ngokunyanisekileyo nokuqinisekisa kwiprojekthi nganye zobunjineli ukuba berun kakuhle kunye neshedyuli.
Ukususela ngo-2003, siye hadformulated yesu jikelele zithe gqolo carryingout esi sicwangciso. Emva kweminyaka ukuphuhlisa, siye suppliedqualified ngempumelelo iimveliso kunye inkonzo ebalaseleyo kumazwe angaphezulu kwama-40 kulo theworld. Kwiminyaka edlulileyo, avuke xa Tower nendwe ezisetyenzisiweyo ukwakha shoppingmalls ezintsha embindini Bangkok, Thailand, izileyi indlela wavuka kunye ugrade werebusy ukuba kuhola wendlela entsha esuka Oran ukuya Algiers, Algeria, The abangu diggingfor uthixo ngoncedo excavator kokuvuka ngayo. Kule mihla, Abantu ukufumana matshini moreand uvukile ngakumbi ukuba ukusebenza kunye nabo, baye ubungqina RISEN'smachines ukutshintsha indlela ihlabathi kuphuculwe ubomi babo.
Ukubambelela viewpointof "Akukho kakuhle, kuphela ngcono", wavuka usoloko ekuzalisekiseni le mbono zombini productquality kunye nenkonzo. Ukuze kufezekiswe le njongo, wavuka ulawulo umgangatho theproduct ngokungqongqo. Okwangoku, siye ukuseka isazulu mechanicsteam kunye oversea inkonzo kakhulu-abanezakhono ehlabathini lonke.